Gobe: Cilmi Raage
Geeridii Sayid Maxamed
Xilligii Daraawiishta waxaa Soomaali kasoo baxay rag door ah oo gabya oo halgankaa lid ku ahaa. Sababo kala duwan ayaa mid walba oo nimankaa ka mid ah mucaarad ka dhigay: ninbay mucaaradnimadiisu shaqsi ahayd, midbay qoys hoose oo uu ka dhashay iyo Daraawiish xurguf dhexmartay ku salanaysnayd, midbay laaluush iyo gunno Ingiriis u lulay hodday. Midba si ayuu xadka uga tallaabay.
Arinta ugu weyn ee Daraawiish iyo raggaa aan xusnay isku dirtay waxaa lagu sheegi karaa inay ahayd midda qabyaaladda. Sidaan ognahay, Soomaalidu qabyaaladda way ku daran tahay, gabayaaguna Soomaalidaa ayuu ka mid yahay oo uu waliba ugu cod dheer yahay.
Sebenkii Daraawiishta, nimanka gabyaa badankoodu waxay isu fiirin jireen dhaqdhaqaaqa Daraawiishta iyo jilibka ay ka dhasheen danta ugu jirta haddii Daraawiishi xooggaysato hadafkeeduna taabogalo. Haddii gabayaagu – waa qaarkoode - u arko in danta guud ay ka hor imanayso midda gaarka u ah jibsintiisa, mucaarad ayuu noqon jiray. Kol haddii uu mucaarad noqdana afkiisa ayuu maali jiray oo uu isku dayi jiray inuu weerar iyo difaacba ka noqdo waxa ugu muuqda danta qoyskiisa.
Haddaba, ragga gabayga caanka ku ah ee Daraawiish iyo halgankii Sayid Maxamed ka hor yimid waxaa ka mid ahaa gabayaa la odhan jiray Cilmi Raage oo reer Qorraxeey ahaa. Cilmi gabayo badan ayuu Sayidka iyo Daraawiishba u mariyey, kolkiise uu maqlay geeridii Sayid Maxamed iyo daanadii Ingiriis caga-weyne ku falay Daraawiish ayuu midkii ugu darraa tiriyey.
Cilmi judhiiba inuu aad ugu farxay geerida Sayidka ee lasoo tabiyey ayuu ina dareensiiyey. Maal iyo degaan, guri iyo garashoba intii uu hodanka ku ahaa laguna tixgalin jiray balse ay Daraawiishi dhaafisay inaanay waxba la ahayn wax walbana jabka Bahgeri soo gaadhay kala weyn yahay ayuu raaciyey.
Guud ahaan, wuxuu mariyey gabay digasho ah oo aan aakhiro iyo adduun midna carabka la gafin. Waa gabay aan Daraawiish iyo Sayid Maxamed kaliya ku ekaanin laakiin ku digtay cid walba oo ay Cilmi ugu muuqatay inay Daraawiish la jirto. Bahgeri oo Sayidku ka dhashay, Makaahiil iyo madaxdiisii oo uu Rafle Guuleed Hagoog ugu horreeyo iyo qof kasta oo godob ka qabay ayuu bagga ku leeyahay. Mar haddii Sayid Maxamed aakhiro u guuray ma tolalkaasaa guluf dambe igu soo bixin kara weeye dulucdiisu.
Cilmi wuxuu qaadan la’a yahay wixii uu awood iyo xoog Sayid Maxamed lahaa inuu maanta uun aakharaad ka yahay. Waxaa kale oo ay Cilmi la tahay inaan Sayidka wax camalsan ahi aakharo uga horraynin. Sidii iyadoo Sayidku mowdka isu hayo, ayuu wuxuu Cilmi la yaaban yahay sida uu aakharo laabta u siiyey! Ugu damabayntii, Cilmi maba aaminsana in Sayid Maxamed geeryooday, wuxuuna qabaa inuu wali dhaqan yahay oo uu aroos iyo barwaaqo, guubaabo iyo dagaal gelin wali baaqi ku yahay.
Sidaan wada ognahay, qofna camal kaliya naxariista Alle kuma helo, jannaduna waa gallad Eebbe uu bixiyo. Qofkii shaqaysta, Allena ku manaysto ayunbaa jannada hela. Waxaase xaqiiqo ah in Sayid Maxamed Cabdille Xasan uu ahaa ehlu kheyr, mujaahid, caalim, caabid iyo saalixba. Sidaa awgeed, ninkii dooni ha hadlee, Sayidku sharaf iyo wanaag ayuu dunida ku noolaa kagana tagay, aakharana sidaan qabo waa ehlu janno.
Taariikh ahaan iyo xikmadda gabayga oo aynu ku xasilno uun iyadoo qasdigeenu yahay, gabaygii Cilmi Raage waa kan:
Iimeey galkeediyo warkii webi kasoo guulay
Ee guurihii noogu yimid gurigan ruuxiisa
Ganka waan ka diirsaday wadnaha gacaladiisiiye
Goonyaha shan jeer baan is-rogay galindhexaadkiiye
Sida goodir dhalay baa qalbigu ii gunuunucaye
Guuloow ha beenayn xalay gini i siiyeene
Afartaa garraax lama hadlee godoro maw xaadhay
Sidii webi galdaasa ah miyaan gabiyadii dhaafay
Galgala-baxaygii miyaan uunka wada gaadhay
Galoof lama shubee xalay miyaa layga wada guufay
Goortuu gabbaan soocan jiray gorof miyaan buuxshay
Caawaana gobaa igu habane bal aan gufaacoodo
Waxay gu’itin moodeen armuu yara gamuuyooday
Wadaadkii gunaanaday miyaa yaraha guulguulay
Sideebuu u go’ay Maxamed sow lagama hayn gaadhka
Guhaaddiisa wiilkaan bartiyo geesinimadiisa
Sallib baa god loo qoday anaan laabta galinayne
Anse mooyi Guullaw Illaah noo garbixiyaana
Ima galin galladahay wadeen gooshigii shalaye
Kolkii mowdka lagu soo ganees galiyey waabeyda
Amuu gii lahaa ee wadnaha gacantu ay fuushay
Girligaanadiisii miyaan goobta lagu haynin
Goonyaha miyaan laga fadhiyin gole nijaaseedka
Gooskii miyaan lagula jirin gubadii baaruudda
Gabas loola fiirsaday kolkuu galay bogaaggiisa
Gumcadle iyo Abraahiin miyaan geydh u diriraynin
Giddi Haber Saleebaan miyaan daba guclaynaynin
Isagaa u gaardiyi jiree Gallac miyaan joogin
Ma Raflaan guddiga hayn sidee garacii loo aasay
Aakhiro sidee ugu galbaday doqonsanaa gaalku
Haddaasuu garuumaynayaa gabadh Islaameede
Haddaasuu garoob meher la’ iyo garandi haystaaye
Haddaasuu haween ula galbani gobartii waynayde
Haddaasuu cadkuu goosan jiray gawska ku hayaaye
Haddaasuu gojaxa loo karshiyo garaw cunaayaaye…
Haddaasuu galaay iyo baxaay ugu galaydhyayne
Haddaasey u gaardiyahayaan golihii naareede
Haddaasuu Rasuulkii gafsiin qoomka garab yaalle
Shir gamaaman waayeel gab yidhi odayo guulaaya
Arrin guud ah gaardiyo xarago gooddi iyo fuulmo
Waxba yaanan geedaha tolkay gabay ka luuqayne
Geel nimaan lahayn baa wadnuhu guban diraacdiiye
Gamashiga hayaanka ah dadkoo bari ka soo guuray
Waxba yaanan gooraan ku furin galihii Baarjeexe
Gangan iyo gafuurkii hadhiyo Faafan gudaheeda
Waxba yaanan Duumaale geyn sebenkan Giirbey e
Waxba yaan gadhoodh lagaga lulin gacammadii Ciine
Gu’ samaaday deegaan gig tidhi, gocorro doogoobay
Galadiid gobkii Dooxa Weyn, Gorayga meeshiisa
Waxba yaan furaash lagu gamo’ iyo gaadh la’ii dhigine
Kabadhahakan soo gudahayee Guban ka soo dhoofay
Waxba yaanan gooshaashka yimid maro ka soo goyne
Anigoo gargaar qaba kuwii galab i naafeeyay
Guska iyo xiniinyaha kuwii iiga gudi waayay
Nimankii raggaan garabsan jiray gudurida u loogay
Kol hadday Bahgari gaabatay ooy goob xun wada joogto
Ooy sida gal-miireed gudheen waan gargaarahaye
Gacallowah Eebbaw haddaad gaaladii lumisay.
Sidan si ka duwan haddii aad gabaygan u maqashay fadlan nala soo xidhiidh: mail@doollo.com
Waxaa soo saxay meerisyo baddanna aanu ka helnay Maxamed-rashiid Sheekh Cabdullahi.